किन गरे बाबुरामले एमाओवादी परित्यागको घोषणा ? - Enepalese.com
किन गरे बाबुरामले एमाओवादी परित्यागको घोषणा ?
इनेप्लिज २०७२ असोज ९ गते १०:३१ मा प्रकाशित
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले एमाओवादी परित्यागको घोषणा गरेका छन् । शनिबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन सम्मेलन गरेर भट्टराईले एमाओवादी परित्यागको घोषणा गरेका हुन् । यससँगै बाबुराम र प्रचण्डको तीन दशक लामो राजनीतिक सहकार्य तोडिएको छ ।